တစ်ချိန်တည်းမှာ ဝိတ်ကျပြီး ကြွက်သားတွေ တက်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
လှေပုံသဏ္ဍာန်ယောဂပို့စ်(Boat Pose) ကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော အကျိုးကျေးဇူးများ
Boat pose ဆိုတာ အစာခြေစနစ်ကို အားကောင်းစေသာ ယောဂပို့စ်အမျိုးစားတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက အစာမကြေခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက်မှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ယောဂကျင့်ရတာကို ဝါသနာပါသူတွေအတွက် ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကိုလည်း အားကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ Boat Pose ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ယောဂဖျာပေါ်မှာ ဒူးထောက်ပြီး သင့်ရဲ့ ခြေဖျားတွေပေါ် ညီညာစွာထိုင်ပါ။ ကျောကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဆန့်လိုက်ပြီး တင်ပါးဆုံရိုးကို ကြိတ်မိတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။...
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း (၅) မျိုး
လူတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တဲ့အခါ အများအားဖြင့် ပြေးဖို့ နှင့် အားကခန်းမသွားဖို့က လွဲလို့ တစ်ခြားရွေးချယ်စရာမရှိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုကိုယ်အလေးချိန်တွေကျဖို့ ရွေးချယ်စရာတွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမယ့် ရိုးရှင်းသောယောဂလေ့ကျင့်တစ်ချို့ကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။ ၁။ အပေါ်ဘက် plank ထောက် pose ခြေထောက်တွေကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထားပြီး ထိုင်ပါ။ ဒူးတွေကို ကွေးပြီး တင်ပါးကို အပေါ်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမြှင့်တင်ပါ။ သင့်ရဲ့ တင်ပါးကို မြှင့်လိုက်တဲ့အခါ...
Plank လေ့ကျင့်ခန်းကို နေ့စဉ်လုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၅)ချက်
Plank ထောက်တာကို နေ့တိုင်းလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့လူအများစုက လေ့ကျင့်ခန်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်သန်မာမှုနှင့် တည်ငြိမ်သော ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကို လှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့် လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ ကယ်လိုရီအရေအတွက်တွေကို တိုးစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလည်း ကြံ့ခိုင်စေပြီး အချိုးအစားပြေပြစ်စေပါတယ်။ သို့သော် ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိဖို့အတွက် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူက အများကြီးမရှိပါဘူး။ အချိန်မရှိလို့၊ အလုပ်လုပ်ပြီး...
Fitness ချစ်သူတွေအတွက် အွန်လိုင်းငွေရှာဖို့ လွယ်ကူသောနည်းလမ်း (၅)ချက်
Fitness ချစ်သူတွေအတွက် အွန်လိုင်းမှာ ငွေရှာဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း 5ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ Workout Plans တွေရောင်းပါ Workout Plans တွေအွန်လိုင်းမှာရောင်းချခြင်းက ဝင်ငွေအပိုရစေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကို PDF ပုံစံဖန်တီးပါ။ (ဒါမှမဟုတ်) ဗီဒီယိုရိုက်ထားပါ။ အွန်လိုင်းမှတဆင့် ရောင်းချပါ။ ပိုက်ဆံစမရှာခင်မှာ ပထမဆုံး fan base တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်နည်းက...
ခြေထောက်တွေကို ဘာ့ကြောင့်မြှင့်ဖို့လိုတာလဲ? ခြေထောက်တွေကို မြှင့်ထားခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ရတာရိုးရှင်းပြီး မိနစ် ၂၀လောက်သာ ကြာပါလိမ့်မယ်။ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေအားလုံးကို သွေးစီးမှုရောက်တာ သေချာစေဖို့ ကျွန်မတို့နှလုံးက ကြိုးစားအားထုတ်ရပါတယ်။ chronic vein insufficiency (IVC) ခံစားနေရရင် သွေးကြောတွေထုံးတာ, ကြွက်တတ်တာ (သို့) ခြေထောက်တွေမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သလို ခံစားရတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ IVC ရောဂါခံစားနေသူတွေကို...
စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ နာကျင်မှုတွေကနေ လွတ်မြောက်နိုင်မယ့် ယောဂကျင့်နည်း (၄)ချက်
စိတ်ဒဏ်ရာလို့ပြောလိုက်တိုင်း ကျွန်မတို့ဟာ စစ်ပွဲတွေ၊ မတော်တဆမှုတွေနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရခြင်းစတဲ့ အကြောင်းတရဦးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စိတ်ဒဏ်ရာဆိုတာ ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ၊ စိုးရိမ်ပူမှုတွေ၊ ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်မဲ့မှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်မယ့် ယောဂကျင့်နည်းတွေကိုလည်း မျှဝေချင်ပါတယ်။ ၁။ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ရဲ့ အနေအထား သွားကြိတ်ခြင်း၊ မျက်နှာကြွက်သား တင်ခြင်း၊ မေးရိုးအတွင်း တင်းကျပ်ခြင်းစတဲ့အရာတွေက အမြဲတစေထိတ်လန့်ခြင်း (သို့) စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ရဲ့...
fitness စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သင်စိတ်ထဲမှာ မသိမဖြစ် သိထားသင့်သော အကြောင်းအရာများ
ဒီနေ့ခေတ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ဆိုတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုတွေကို သဟဇာတဖြစ်စေဖို့ နှင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝတွေကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက ကျွန်မတို့ကို စွမ်းအင်တွေ ပိုမိုပေးနိုင်သလို ကျွန်မတို့ရဲ့ ဝါသနာတွေမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သလို ကျန်းမာစွာ အသက်ရှည်ဖို့လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် လန်းဆန်းတက်ကြွမှုတွေကို အမြဲတမ်းရရှိနေမှာဖြစ်တာကြောင့် အောက်မှာ မျှဝေပေးမယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့ကို...
လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ရေဓာတ်က မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလို ဝိတ်ချတဲ့နေရာမှာလည်း Exercise လုပ်တာ၊ အစားအသောက်တွေကို ပုံစံတကျစားသောက်တာတွေအပြင် ရေသောက်သုံးမှုကလည်း အရေးပါပါတယ်။ ရေများများသောက်ပြီး ရေနဲ့ပဲ ဝိတ်ချတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ရေ ၂လီတာ (ရေသန့်ဘူးကြီး ၂ဘူး) သောက်သုံးပေးရပါမယ်။ အဲ့ဒီလိုရေနဲ့ ဝိတ်ချနည်းမှာ အဆီပိုတွေ ကယ်လိုရီတွေ မြန်မြန်လောင်ကျွမ်းစေပြီး ဝိတ်အမြန်ကျစေဖို့ အကောင်းဆုံးရေသောက်သင့်တဲ့ အချိန်တွေက ၁. ဆာလောင်နေတဲ့အချိန်...
ခေါင်းအုံးလေးတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ ကြွက်သားတွေ သန်မာစေဖို့ပြုလုပ်နိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၆ ) ခု
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ စတူဒီယိုတွေ၊ အားကစားခန်းမတွေအထိ သွားဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာပဲ ခေါင်းအုံးလေးတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ သက်သက်သာသာ သင့်ရဲ့ အဆီကို ကျစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေရှိနေပါပြီ။ ၎င်းနည်းလမ်းလေးတွေကိုပဲ ဒီကနေ့မှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ superwoman ရဲ့ ခွန်အားသန်သော လေ့ကျင့်ခန်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - မှောက်ခုံ အိပ်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်က ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်...